DOWNLOAD AH-1W Super ajụala AlphaSim FS2004 - Rikoooo
ebube add-on ex payware ugbu a freeware na ị ga-ahụ n'anya.
AlphaSim AH-1W Atụmatụ maka FS2004
1. Oké elu-edu nlereanya, textures na mebere kokpiiti
2. Full FS2004 nlereanya gụnyere nile FS2004 atụmatụ.
3. Ukwuu authentic virtual kokpiiti na eserese na (ụfọdụ) mouseable switches
4. Ezigbo nile-XML 2D panel, omenala mmapụta maka redio tojupụtara, n'ụzọ zuru ezu mouseable.
5. Ukwuu na-ezi uche akwọ ụgbọ atụmatụ anya na mputa echiche. Arụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ toggled ma gbanyụọ abụọ ụzọ ọpụpụ iwu (Mgbanwe-E + 2).
6. Rotor pupụtara animated na-egosi pụta ìhè / AFT na-ekpe / nri tilt (FS9 naanị).
7. Animated agba egbe (on njikwa ọsọ ọsọ).
8. Animated akwọ ụgbọ ọnụ ụzọ (Mgbanwe-E).
9. Virtual kokpiiti mmiri ozuzo mmetụta (FS9 naanị).
Mgbanwe-1 amama isi kokpiiti panel ma gbanyụọ na kokpiiti echiche.
Mgbanwe-2 egosiputa Radio Stack.
Mgbanwe-3 egosiputa ọkọlọtọ GPS.
1. The tailhook elu / ala iwu (a ga-e kenyere a isi ma ọ bụ joystick button) ga-ewepụ ihe-agha si nku pylons. Ị ga-enwe na-aka ikpochapụ payload ụgbọ na Fuel na Payload dialog igbe na-enịm kwesịrị ekwesị ka ịdị arọ nke dị ọcha helikopta.
2. Zuru ezu checklist na akwụkwọ kaadị dị na kneeboard (F10).
3. N'azụ kanopi isi ọrịa strok ewepu pilot ọnụ ọgụgụ site model
Ọ dị ezigbo mkpa na-agụ akwụkwọ ntuziaka nke helikopta a (Lee “menu” menu “Rikoooo add-onwdg, wdg.